Soo dejisan Dxtory 2.0.133 – Vessoft
Qabashada Screen, Games
Soo dejisan Dxtory
Dxtory – software ah qabashada shaashadda iyo rikoodh video ka kulan ka. Dxtory uu leeyahay tiro badan oo ka mid ah fursadaha iyo goobaha. Software waxaa ka mid ah algorithms sare, taasi ma saameyn ha xawaaraha ciyaarta inta lagu jiro duubo. Dxtory awood u la qabsato tayada video ah, doortaan codecs audio iyo video, sheeg in codka Dhawaaqay mid Dhawaaqi waxaa lagu diiwaangeliyaa, dooro gal ah in uu kaydiyo video iwm software ayaa sidoo kale u ogolaataa in uu soo bandhigo tirada lugahooda halkii labaad oo ay qabsadaan ay screenshots.
Video lagu qoro ka kulan ee
Tiro badan oo goobaha
Muujiya tirada lugahooda halkii labaad
Dxtory Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Open Broadcaster Software 0.659
العربية, English, Українська, Français... Free Screen Video Recorder 3.0.44.831
English, Français, Español, Deutsch... XSplit Broadcaster 2.8.1607.1944
العربية, English, Українська, Français... Tunngle 5.8.3
English, Français, Deutsch, Italiano... GameRanger 1.0.0.0
العربية, English, Українська, Français... Nokia PC Suite 7.1.180.94
Phone Tababaraha The ee telefoonada gacanta ka shirkadda Nokia ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan faylasha, xiriirada, fariimaha iyo xiran xogta la your computer.